Isku aadka Afar dhammaadka oo dhammaystirmay, sida ay xulalku isugu aadeen & Halka lagu ciyaari doono Semi-finalka iyo Final-ka Euro 2020 – Gool FM
(Yurub) 04 Luulyo 2021. Xulka qaranka Spain ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee gaara afar dhammaadka ama Semi-finalka Euro 2020 Jimcihii, waxaana maalin kaddib kula biiray xulka Talyaaniga.
La Roja ayaa iska xaadirisay afarta ugu dambeysa ee tartankan kaddib markii ay rigooreyaal ku garaaceen Switzerland ciyaar ka dhacday Saint Petersburg, markii ay ciyaartu ku dhammaaday barbaro 1-1, xulka Tababare Luis Enrique ayaana hoggaanka qabtay markii uu own goal iska dhaliyey Denis Zakaria, ka hor inta aysan qaladaad ay sameeyeen Aymeric Laporte iyo Pau Torres fursadda barbaraha siinin Swiss.
Kulankaas kaddib waxaa baasmay kulan kale, iyadoo Azzurri ay garaaceen Belgium, xulka kaalinta koowaad kaga jira kala sarreynta xulalka Adduunka ayaa 2-1 guuldarro kala kulmay Talyaaniga kulankii ka dhacay Magaalada Munich, kaddib goolal ka kala yimid Nicolo Barella iyo Lorenzo Insigne.
Natiijada ka soo baxday labadaas kulan ayaana ka dhigtay in kulan kale oo weyn aan ku daawan doono afar dhammaadka Euro 2020 kaddib markii ay isku beegmeen Italy iyo Spain.
Dhina kale Sabtidii, xulka Denmark ayaa xaqiijistay booskooda Semi-finalka Euro 2020 kaddib markii ay 2-1 ku garaaceen Czech Republic, goolal ka kala yimid Thomas Delaney iyo Kasper Dolberg ayaa xulka Danes kaga filnaatay inay gaaraan afar dhammaadka.
Xulka England ayaa dhankiisa 4-0 ku garaacay xalay Ukraine kulankii ka dhacay Rome, kaasoo ugu dambeeyey siddeed dhammaadka, waxaana ay afar dhammaadka Euro 2020 la ciyaari doonaan Denmark.
Harry Kane ayaa goolasha u daah furay xulka saddexda Libaax, laakiin qeybtii labaad ayay goolal kale ka heleen Maguire, Kane markale iyo Jordan Henderson, waxaana taasi ay u sahashay inay iska xaadiriyaan semi-finalka Euro 2020.
Sidee loo ciyaari doonaa, halkee ayaase lagu ciyaari doonaa kulammada afar dhammaadka Euro 2020?
Labada kulan ee semi-finalka Euro 2020 ayaa ka dhici doona garoonka Wembley, kulanka koowaad ayaa la ciyaari doonaa Talaadada, halka kulanka labaad la dheeli doono maalinta xigta ee Arbacada ah.
Kulanka koowaad ee afar dhammaadka, kaasoo u dhexeeya xulalka Italy iyo Spain ayaa ka dhici doona garoonka Wembley Talaadada oo ay taariikhdu tahay 06 bisha July marka ay saacadda geeska Afrika tahay 10:00 Habeennimo.
England ayaa maalin kaddib iyaguna garoonkooda Wembley ku wajihi doona Denmark, waxaana kulankan uu qabsoomi doonaa Arbacada oo ay taariikhdu tahay 07 bishan July, marka ay saacadda geeska Afrika tahay 10:00 Habeennimo.
FINAL-KA EURO 2020:-
Kulanka final-ka koobka qarammada Yurub ee Euro 2020 ayaa isaguna labada xul ee ka soo baxa afartaan xul ee aan kor ku soo xusnay waxa ay ku wada ciyaari doonaan isla garoonka Wembley ee Magaalada London, Maalin Axad ah oo ay taariikhdu tahay 11 bishan July ee 2021.
RASMI: Francisco Trincão oo amaah ugu biiray naadiga Wolves